ukufumana acquainted kunye, get ukwazi Ilizwi Ubhekiso Iiforam
Kungani ulwazi kunye pronoun ichanekile, ngexesha ukwenza acquaintance kunye umntu (Igama umntu) nzima? Okuphakathi kuthetha qua likwenza kuyanqaphazekaarely kuthi? Xa kuthiwe ukuba nzima, oko kuthetha ukuba ayinjalo grammatically ezingachanekanga, kodwa ukwakhiwa izandi engalunganga ukuba iindlebe regulars, kwaye qua kukho iindlela ezininzi elula ukuya kuthi. Mna kuba impression qua kunye lokuqala intshukumo ngu mutual (zombini ingaba kulungile qua kukho qua enye umxholo), ebizakuba no ukwazi (omnye nomnye). Kunye okwesibini, ndiya kuba impression ukuba isenzo ayikho necessarily mutual, Upetros yenza acquaintance ka Upawulos — gt ingaba uyaqonda ukuba mnye kuphela Ilitye sele ulwazi, okanye ukuba Upawulos waye kanjalo wenza aware (zelitye)? Kule meko, xa sithi: Upetros waba acquainted kunye Upawulos (okanye Upetros, ndenza acquaintance ka Upawulos) oku kuthetha ukuba kuphela ailitye sele ulwazi, oko kuthetha ukuba Upawulos alifumanisanga ndenza acquaintance Kapetros? Kwaye ngokungafaniyo Upetros Nopawulos kuba ulwazi ngenxa apha intshukumo ngu mutual, yokuba ulwazi ezinye? — Kwi-imizekelo kwaba emva kunye zinto kwaye hayi abantu ngoko kucacile ukuba isenzo ayikho mutual.
Lathi kuphela ukuba Upetros kuhlangatyezwana nazo Upawulos okokuqala. Kuyenzeka ukuba Upetros okanye Upawulos wayesazi lomnye ke bona, okanye nge-hearsay, kodwa akukho nto utshilo. Ewe, yinyaniso, strictly ukuthetha kuphela into qua singathi ngu ukuba Ilitye ngu ngobukho, kodwa kuba Upawulos, omnye sele uyazi, kuba kuye nto yathi. Ezilungileyo Ah? Noko ke, ukususela oko ndaqonda ukusuka ntoni wathi ndandicinga qua kwabakho umahluko phakathi Upetros Nopawulos kuhlangatyezwana nazo kwaye Upetros waba acquainted kunye Upawulos (okanye Upetros, ndenza acquaintance ka Upawulos), akukho? Lokuqala nayo argued ukuba Upawulos waba aware (zelitye), ngokungafaniyo yesibini apho akuvumelekanga kwazeke ukuba Upawulos sele okanye alifumanisanga ulwazi Ilitye. Ukuba Upetros yenza acquaintance ka Upawulos, necessarily Upawulos kanjalo ulwazi Ilitye, akukho? Ngenxa yokuba omabini qua abanalo ulwazi, yi-inkcazelo angena hayi nokwazi — ubuqu, naliphi na ityala: banokuba kuvakala omnye, kodwa ngaphandle yakhe ulwazi. Mna andinaku qinisekisa a imeko apho omnye izakuba ulwazi enye, abo ingaba uyazi sele ubuqu. Mna ke bemangalisiwe ukuba kule isivakalisi, Upetros waba acquainted kunye Upawulos intshukumo waba mutual (nangona kuphela Ilitye ukuba abe malunga), ukuba impendulo ngu-ewe ke izakufana no Upetros Nopawulos made ngamnye nezinye ke acquaintance (abanye), akukho? I-misunderstanding kungaba umahluko emasimini ka-aplikeshini ye-ibinzana verbal isaziso.
Ngamanye amazwi, ngaba kumnika mhlawumbi ngokubanzi evakalayo
ukuba umhlobo libhekisa umntu nayintoni ndizixelela kuwe: lo ngunyana wam ubawo, kodwa qua enomsindo naye lowo uyala ukuba athethe naye kwaye, ke ngoko, ukuba ikho kuni, omnye komnye, ingaba uthi le ngokuhlwa yi-ndizixelela ukuba ibali icandelo lomboniso: ndathola acquainted kunye nobawo wam umhlobo
← Ujonge ukuze kubekho inkqubela
Fumana inzala →